ကိုယ္သံုးလိုက္တဲ့ ေငြတိုင္းအတြက္ ျပန္စုလို႔ရႏိုင္မယ္လို႔ စိတ္ကူးၾကည့္ဖူးလား - ဒိုးမယ်
အစားအသောက်ချစ်သူတို့ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာစားဖြစ်ကြလား ကော်ဖီဆိုင်ရောထိုင်ဖြစ်ကြလား။ကိုယ့်ဘော်ဒါတွေနဲ့ရော TGIF လုပ်ဖို့ ဆုံဖြစ်ကြလား ဒါမှမဟုတ် ပိတ်ရက်တွေတိုင်း အတူတူတွေ့ပြီး စားဖြစ်ကြလား။ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ ငွေတိုင်းအတွက် ပြန်စုလို့ရနိုင်မယ်လို့ စိတ်ကူးကြည့်ဖူးလား။
DOEMAL ရဲ့ REBATE , REDEEM program နဲ့ဆိုရင် အဲ့ဒါတွေ တကယ်ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။
DOEMAL ရဲ့ REBATE , REDEEM program ဆိုတာက အစားအသောက်ချစ်သူတွေအတွက် ကိုယ်သွားစားတိုင်း မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ညီမ ျှတဲ့ DOEMAL DINGA ကို ရရှိမှာဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ကြိမ်မှာ Discount အဖြစ်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
DOEMAL နဲ့ REBATE ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
DOEMAL ရဲ့ ပါတနာဆိုင်တွေမှာ ကိုယ်သုံးလိုက်တဲ့ ပမာဏရဲ့ ရာခို်င်နှုန်းအချို့ကို မြန်မာကျပ်ငွေနဲ့ ညီမ ျှတဲ့ Doemal Dinga အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာ- စားသောက်ဆိုင် ၁ (10% REBATE) မှာ DOEMAL REBATE လို့ပြောပြီး ၁၀၀၀၀ ကျပ် ရှင်းခဲ့တယ် ဆိုရင် REBATE အနေနဲ့DOEMAL DINGA 1000 ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား DOEMAL ရဲ့ ပါတနာဆိုင်တွေမှာလည်း ငွေရှင်းတိုင်း REBATE များများလုပ်ပြီးDOEMAL DINGA တွများများစုနိုင်ပါတယ်။
စုထားတဲ့ DINGA တွေကို REDEEM ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?
စားသောက်ပြီးလို့ ငွေရှင်းတိုင်း စုထားတဲ့ DOEMAL DINGA တွေကို Discount အဖြစ် ပြန်လည်ပေးချေလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ- သင့်မှာ စုထားတဲ့DOEMAL DINGA ၅၀၀၀ ရှိပြီး စားသောက်ဆိုင် ၂ ( 10% REBATE ) မှာ ၁၀၀၀၀ ကျပ် ကျသင့်တယ်ဆိုပါစို့။ REDEEM အနေနဲ့ DOEMAL DINGA ၅၀၀၀ ပေးချေပြီး ကျန် ၅၀၀၀ ကျပ် ကိုသာ ထပ်မံပေးချေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ထပ်မံပေးချေလိုက်ရတဲ့ ၅၀၀၀ ကျပ် ရဲ့ (၁၀%)DOEMAL DINGA ၅၀၀ ကိုလည်း REBATE အဖြစ်ပြန်လည်ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
DOEMAL DINGA ဆိုတာ ဘာလဲ?
DOEMAL DINGA သည် မြန်မာကျပ်ငွေကဲ့သို့ ဖြစ်ပြီး REBATE အနေနဲ့ DINGA ဘယ်လောက်ကိုရရှိသည် REDEEM အနေနဲ့ DINGA ဘယ်လောက်ပေးချေခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ မကြာမီတွင် DOEMAL DINGA ကို အသုံးပြုပြီး အွန်လိုင်းမှ အစားအသောက်များမှာယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Doemal Partners Restaurants တွေက ဘယ်ဟာတွေလဲ?
No,(31/A), Aungzayya Road,Yankin Township,Yangon
No.132,Gandamar Street,Mayangone Township,Yangon,Myanmar
Corner of Min Ye Kyaw Road and Pho Bar Bar Road, Lanmadaw Township,Yangon
No. 31, Shin Saw Pu Road, Sanchaung Township,Yangon
Address-Unit G01, Bo Myat Tun Tower, Bo Myat Htun Street ( lower block), Botataung, Yangon
Address -No.32, Myittar Road, 11st Ward, South Okkalapa Township, Yangon.
DOEMAL နဲ့ဆို DINGA ရတယ်
ဆက်စပ် အကြောင်းအရာများ >>doemal, Doemal Rebate and Redeem, mobile application, partners, rebate, rebate shops, redeem, restaurant, restaurant finder, yangon